Menma Omenala Matraard na Springs na-emepụta akwụkwọ | Rayson
Mgbe ọtụtụ afọ nke siri ike na ngwa ngwa, Rayson etoola n'otu n'ime ndị ọrụ kachasị aka na ndị ọrụ na China. Menirds matrards na igbe mmiri taa, Rayson nọ n'elu dị ka onye na-eweta ọkachamara na ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike imewe, mepụta, mepụta, ma ree usoro dị iche iche na nke anyị na-ejikọ mbọ niile na amamihe anyị niile. Ọzọkwa, anyị na-ahụ maka inye ndị ahịa ọrụ dịgasị iche iche maka ndị ahịa gụnyere nkwado ọrụ na ọrụ ọsọ ọsọ. May nwere ike ịchọpụtakwuo ihe gbasara mkpụrụ osisi ọhụrụ na ụlọ ọrụ anyị site na ozugbo ịkpọlite ​​US.Tis na-anọchite anya njirimara, omume ndụ, na mmanye onwe onye nke ndị mmadụ. Ọ na-ere nke ọma n'ihi na ọtụtụ ihe ndị kasị hụ n'anya.